दिवालियापन कानून | Law & More | आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डम
नेदरल्याण्ड्समा दिवालियापन कानून
वित्तीय विकास र अन्य सर्तहरूको चिन्ता जसले कम्पनीहरूले अब उनीहरूको orsणदातालाई तिर्न सक्षम छैनन्, कम्पनीलाई दिवालिया हुन सक्छ। दिवालियापन जो कोही संलग्न को लागि एक दुःस्वप्न हुन सक्छ। जब तपाइँको कम्पनी को वित्तीय समस्याहरु छ, यो एक ईन्सोलभन्सी वकिललाई सम्पर्क गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे यो बैंकरप्टेस याचिका हो वा बैंकरप्टोको घोषणाको बिरूद्ध बचावको सवाल हो, हाम्रो दिवालियापनका वकिलले तपाईंलाई उत्तम दृष्टिकोण र रणनीतिमा सल्लाह दिन सक्छन्। Law & More दिवालियाताको लागि फाइल गरिएको दलहरूको निर्देशक, सेयरधारकहरू, कर्मचारीहरू र लेनदारहरूलाई मद्दत गर्दछ। हाम्रो टोली दिवालियापनको नतिजा सीमित गर्न उपायहरू लिन प्रयास गर्दछ।
के तपाईं कानूनी समर्थन प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ?
कृपया सम्पर्क गर्नुहोस LAW & MORE
वित्तीय विकास र अन्य सर्तहरूको चिन्ता जसले कम्पनीहरूले अब उनीहरूको orsणदातालाई तिर्न सक्षम छैनन्, कम्पनीलाई दिवालिया हुन सक्छ। दिवालियापन जो कोही संलग्न को लागि एक दुःस्वप्न हुन सक्छ। जब तपाइँको कम्पनी को वित्तीय समस्याहरु छ, यो एक ईन्सोलभन्सी वकिललाई सम्पर्क गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे यो बैंकरप्टेस याचिका हो वा बैंकरप्टोको घोषणाको बिरूद्ध बचावको सवाल हो, हाम्रो दिवालियापनका वकिलले तपाईंलाई उत्तम दृष्टिकोण र रणनीतिमा सल्लाह दिन सक्छन्।
Law & More दिवालियाताको लागि फाइल गरिएको दलहरूको निर्देशक, सेयरधारकहरू, कर्मचारीहरू र लेनदारहरूलाई मद्दत गर्दछ। हाम्रो टोली दिवालियापनको नतिजा सीमित गर्न उपायहरू लिन प्रयास गर्दछ। हामी लेनदारहरूसँग सम्झौतामा पुग्न सल्लाह दिन सक्छौं, पुन: सुरू सक्षम गर्न वा कानूनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन सक्छौं। Law & More दिवालियापन को लागी निम्नलिखित सेवाहरु प्रदान गर्दछ:
Bank दिवालियापन वा स्थगितको सम्बन्धमा सल्लाह प्रदान गर्ने;
Credit लेनदार संग व्यवस्था बनाउने;
Rest पुनःसुरु बनाउँदै;
Direct निर्देशकहरू, शेयरधारकहरू वा अन्य इच्छुक पार्टीहरूको व्यक्तिगत दायित्वमा सल्लाह दिने;
Legal कानुनी कार्यवाही;
Tors torsणीको दिवालियापनको लागि फाइलिंग।
यदि तपाईं एक लेनदेनकर्ता हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई निलम्बन, इजाजतपत्र वा सेट-अफको अधिकार लागू गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं जुन तपाईंलाई हकदार छ। हामी तपाइँको तपाइँको सुरक्षा अधिकारहरु लाई जम्मा गर्न सहयोग गर्न सक्छौं, जस्तै प्रतिज्ञा र धितो अधिकार, शीर्षक कायम गर्ने अधिकार, बैंक ग्यारेन्टी, सुरक्षा निक्षेप वा संयुक्त र दायित्व को खाता मा कार्यहरु।
यदि तपाईं torणी हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई माथि उल्लेखित सुरक्षा अधिकार र सम्बन्धित जोखिम सम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सहयोग गर्न सक्छौं। हामी तपाईंलाई एक हदसम्म सल्लाह दिन सक्दछौं कि एक लेनदारले केहि अधिकारहरूको अभ्यास गर्न अधिकार पाएको छ र यी अधिकारहरूको गलत कार्यान्वयनको स्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्दछ।
बैंकरप्सी ऐनका अनुसार, एक torणी जसले outstandingण तिर्न सक्षम छैन भन्ने आशा गर्दछ उसले स्थगितको लागि आवेदन दिन सक्छ। यसको मतलब यो छ कि एक torणी भुक्तानीमा ढिलाइका लागि प्रदान गरिएको छ। यो ढिलाइ केवल कानूनी संस्था र स्वाभाविक व्यक्तिको लागि प्रदान गर्न सकिन्छ जसले स्वतन्त्र पेशा वा व्यवसाय प्रयोग गर्दछ। साथै, यो theणी वा कम्पनी आफैले मात्र लागू गर्न सक्दछ। यस ढिलाइको उद्देश्य दिवालियापनबाट बच्न र कम्पनीलाई अवस्थित रहन अनुमति दिनु हो। रेफरमेन्टले torणीलाई समय र अवसर दिन्छ आफ्नो व्यवसायलाई क्रमबद्ध गर्न। अभ्यासमा, यो विकल्पले प्राय: torsणदाताहरूसँग भुक्तानको प्रबन्धमा नेतृत्व गर्दछ। रेफरमेन्ट त्यसैले आउँदै गरेको दिवालियापन को स्थिति मा एक समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छ। यद्यपि, torsणीहरू जहिले पनि तिनीहरूको व्यवसाय क्रममा प्राप्त गर्न सफल हुँदैनन्। भुक्तानीमा ढिलाइ प्रायः दिवालियापनको अग्रगामी मानिन्छ।
बैंकरप्सी ऐन बमोजिम, एक torणी, जो आफूले तिर्न असफल भएको अवस्थामा छ, अदालतको आदेशले दिवालिया घोषित गरिनेछ। दिवालियापन को उद्देश्य लेनदारहरु बीच torणको सम्पत्ति विभाजन छ। Torणी एक निजी व्यक्ति हुन सक्छ, जस्तै एक प्राकृतिक व्यक्ति, एक मानिस व्यापार वा एक सामान्य साझेदारी, तर कानुनी निकाय, जस्तै BV वा NV एक bankणी कम्तीमा दुई लेनदार छन् भने बैंकरrupt घोषित गर्न सकिन्छ ।
थप रूपमा, कम्तिमा एउटा unण तिर्नुपर्दैन, यो हुनुपर्दछ। त्यो अवस्थामा, एक दावी योग्य isण छ। बैंकरपसीसी दुबैको लागि आवेदकको आफ्नै घोषणामा र एक वा धेरै लेनदारहरूको अनुरोधमा फाइल गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ सार्वजनिक चासो सम्बन्धित कारणहरु छन् भने, सार्वजनिक अभियोजकको कार्यालय दिवालियापन को लागी फाइल गर्न सक्दछ।
दिवालियापनको घोषणा पछि, दिवाली पार्टीले दिवालियापनसँग सम्बन्धित आफ्नो सम्पत्तिहरूको निपटान र व्यवस्थापन गुमाउँछ। दिवाली पार्टीले अब यी सम्पत्तिहरूमा कुनै पनि प्रभाव प्रयोग गर्न सक्नेछैन। एक विश्वस्त नियुक्त हुनेछ; यो एक न्यायिक ट्रस्टी हो जसलाई इन्सोलभेन्ट एस्टेटको व्यवस्थापन र तरलताको आरोप लगाइनेछ। ट्रस्टीले यसैले दिवालिया सम्पत्तीको साथ के हुन्छ निर्णय गर्नेछ। यो सम्भव छ कि ट्रस्टी लेनदारहरु संग एक व्यवस्था मा पुग्छ। यस सन्दर्भमा, यो सहमति हुन सक्छ कि कम से कम तिनीहरूको ofण को एक हिस्सा फिर्ता हुनेछ। यदि त्यस्तो सम्झौता हुन सकेन भने, ट्रस्टी दिवालियापन पूर्ण गर्न अघि बढ्नेछ। एस्टेट बेचिनेछ र आय लेनदारहरु बीच बाँडिनेछ। बन्दोबस्त पछि, एक कानूनी संस्था जो दिवालिया घोषित भएको छ विघटन हुनेछ।
के तपाईले इन्सल्भन्सी कानूनसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ र के तपाई कानूनी समर्थन प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More.